Ukucaciswa kweVivo Y3 kukhutshiwe ngokupheleleyo | I-Androidsis
Ikhamera engasemva kathathu kunye neHelio P35 yiyo eza kufika ngeVivo Y3 esele ivuthiwe
UAron Rivas | | Iiselfowuni, Izaziso
Ukuvuza okutsha kutyhile ukuba iVivo inefowuni entsha ekumgangatho ophakathi kuphuhliso. Isixhobo, esibizwa Vivo Y3, Izabelo ezininzi ezichaziweyo kunye noyilo kunye neVivo Y17 esele ibhengeziwe, enye indawo ekumgangatho ophakathi.
Kule ndawo ivuza, Izibonelelo zeVivo Y3 ziveziwe, kwaye sichaza iinkcukacha ngezantsi. Sikwabonisa ukunikezelwa kwesixhobo esikhanyisiweyo kunye nazo zonke iimpawu zaso.
Ngokwoko kuye kwaqokelelwa ekugqibeleni, iVivo Y3 ine Isikrini esingu-6.35-intshi esine-HD + isisombululo seepixels eziyi-1,544 x 720. Le Halo i-FullView ene-19.3: umlinganiso we-9 yomlinganiso kunye nenotshi yasemanzini.
IVivo Y3 ivuza
Ngaphakathi kukho ifayile ye- IHelio P35 chipset evela kwiMediaTek, ebhangqiwe nge-4 GB ye-RAM kunye ne-64/128 GB yendawo yokugcina yangaphakathi.
IVivo Y3, njenge-Y17, ine imodyuli yekhamera kathathu Ukucwangciswa kuyafana. Ikhamera ephambili yiprosesa ye-13 MP kwaye idityaniswe nge-8 MP ye-angle enkulu ye-angle sensor kunye ne-2 MP sensor. Kukho ukukhanya kwe-LED phantsi kweenzwa kunye nesikena seminwe phakathi. Nangona kunjalo, tshintsha ikhamera ye-20 MP ye-selfie ye-8 MP.
Unxiba a I-5,000 mAh ibhetri enkulu phantsi kwe-hood ehlawulisa ngezibuko le-microUSB kwaye, njenge-Y17, kufuneka ibenenkxaso yetekhnoloji yokutshaja eyi-18W.Kwaye, iY3 inyathela i-159.43 x 76.77 x 8.92 iimilimitha kwaye inobunzima be-190.5 gram.
I-Vivo S1 Pro: Uluhlu olutsha lwephakathi kunye nekhamera erhoxisiweyo
Unikezelo oluqhotyoshelweyo apha ngasentla lubonisa ukuba ifowuni iza kuza ngombala opinki obizwa ngokuba yiPeach Powder. I-Vivo Y3 kulindeleke ukuba iphehlelele e-China kamva kule nyanga kwaye ibe nexabiso malunga ne-1,400 yuan (~ 190 euros), ngokutsho komthombo.
(Fuente | Ngendlela)
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ikhamera engasemva kathathu kunye neHelio P35 yiyo eza kufika ngeVivo Y3 esele ivuthiwe
Nceda u-elephantid onobuhlobo awele iibhlorho ezininzi kwi-Euler yeNdlovu
Ixabiso le-Oppo K3 kunye ne-specs ityhilwe ngokupheleleyo